Muuri News Network » Faah faahin: Dagaal Culus oo dhacay & Meydadka Al shabaabb oo Wadooyinka Yaala.
Faah faahin: Dagaal Culus oo dhacay & Meydadka Al shabaabb oo Wadooyinka Yaala.
Nov 2, 2015 - Comments off
Maleeshiyaadka Al shabaab & Ciidanka DF oo kaashanaya kuwa Amisom ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada diinsoor ee gobalka Baay, dagaalkaasi oo ahaa mid aad u Xooganaa dhiig badana uu ku daatay.
Dagaalka oo aad u xooganaa ayaa yimid kadib markii Ciidamada Huwanta ay weerar culus ku qaaden deegaan lagu Magacaabo Misirre oo hoostaga degmada Diinsoor halkaas oo ay ku sugnaayeen kooxda Al-shabaab.
Mid kamid ah Saraakiisha Ciidamada Dowlada ayaa sheegay in weerarkaasi ay Maleeshiyada uga dileen ugu yaraan 11 dagaalyahan, halka ciidamaduna uu kaga geeriyooday 1 Askari oo kaliya.
Sarkaal ka mid ah saraaakiisha hogaaminayay Cidanka oo lagu magacaabo Sugow Cali Xasan ayaa sheegay in Howlgallada milatari ee ka dhanka ah Al-shabaab ay sii wadi doonaan iyagoo bartilmaameed ka dhigan doono deegaanada ay Al-shabaab-ku kaga sugan yihiin Gobolka Baay .
Sarkaalkaas ayaa sidoo kale sheegay dagaalka Culus oo ay la galeeyn al shabaab in ay ku dileyn Maleeshiyo badan oo kooxdaasi ka tirsan hubkii ay wateyna ay ka furteyn.